WAXAAN DOORANAYNAA NOOCYO BADAN OO JIILAAL-ADAG OO BARADHO AH EE BEERTO SIBERIA - BARADHADA
Noocyada baradhada ugu fiican ee beerista Siberia
Wax kasta oo baradho ah iyo meel kasta oo aad ku nooshahay, waa saxan soo dhaweyn leh miiska. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku nooshahay Siberia, xaaladdu waa mid aad u adag.
Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa nooca bataatiga, sida iyo goorta la beeri doono, ku nool aaggan.
In kasta oo xaqiiqda ah in inta badan noocyada hore, horrantooda ay weli dhacdo bartamihii May - tani waa waqtiga aad u baahan tahay inaad ku beeri baradho ee Siberia.
Waa muhiim! Baradhadu waa dhaqanka iftiinka-jecel, sidaas darteed waa in lagu beeray goob aan lahayn duurka iyo geedo. Ciidda waa in ay ahaataa mid cad oo xitaa dabacsan.
Adretta waa baraf hore ee Jarmalka kaas oo difaaca jirkiisa iyo dhaxan. Digriiga baradho waa mugdi madow oo leh saxar isku mid ah. Waxaa si fiican loo keydiyaa oo ma dhumiyo dhadhanka, xitaa iyadoo kaydka dheeraayo. Wax-soo-saarka ayaa aad u hooseeya - 200 kiilo oo kaliya boqolkiiba boqol. Hase yeeshee, tilmaamayaasha kale waxay ka dhigaan mid khudraddaas ka mid ah kuwa ugu fiican ee lagu beerayo guriga.
"Alain" ayaa sidoo kale iska leh noocyada hore bislaada. Digriiga qashinka ah ee wareegsan-oval waxay leeyihiin hilib cad.
Marka la barbar dhigo noocyo kale oo baradho ah, dhalidda waa wax fiican - ilaa 300 kiiloogara boqolkiiba.
Baradho badan ayaa loo isticmaalaa qoto dheer-shiil.
"Antonina" sidoo kale waa nooca ugu horeeya ee cuntada lagu tago. Inta badan waa la koray Galbeedka Siberia. Digriiga ovaluhu wuxuu ka kooban yahay jidh jilicsan. Waxsoosaar wuxuu u dhaxeeyaa 211 ilaa 300 kg / ha hagaagsan. Si fiican u dhajiyay. Marka la eego xaaladaha saxda ah, qiyaastii 95% dalaggii waa la keydiyay.
"Baron" waa wakiil Ural qoysaska. Waxa uu ka mid yahay kuwa ugu fiican ee kooxda hore ee bislaalka ee dhadhanka.
Digriiga ovalaha leh maqaarka cagaarka ah oo casaan iyo indho la'aan. Hilibka baradho waa iftiin huruud ah, iyo xididdada qudhooda miisaankoodu yahay 100-190 g.
Waxsoosaarka baradhada "Baron" ayaa celcelis ahaan gaaray 35 kg / 10 mitir labajibbaaran. m
Si taxadar leh u fududeynta shaqada beerta naqshadeynta ayaa ka caawisa dhiirigelinta. Qalabka noocan oo kale ah sida baradho baradho iyo digriiga baradho ayaa loo isticmaalaa barandhada sii kordhaya.
Kala duwanaanshaha miisaska kale ee Ruushka waa Gloria. Wuxuu leeyahay dhadhan fiican iyo bandhigid. Celceliska miisaanka ee digriiga waa qiyaastii 70-130 g. Kala duwan ayaa badanaa ku koray Ruushka, Moldova iyo Ukraine. Digriiga daboolka ah "Gloria" waa qaab qurux badan. Darajada waa mid aan qabin tiknoolojiga beerashada, uma baahna agrotechnology. "Gloria" waxay leedahay difaac fiican oo ka dhan ah cudurka.
Noocyo baradhada "Zhukovsky early" waxay ku faantaa xilliga Bisaylkiisa: macno ahaan 55-60 maalmood ka dib markii la beerto, waa diyaar u ah isticmaalka. Si kastaba ha ahaatee, tani ma saameynayso cabbirka digriiga, maxaa yeelay waxay miisaankoodu noqon karaa ilaa 170 g. Jidhka "Jukovsky Early" waa baraf. Kala duwan ayaa leh difaac wanaagsan. Baradhadu waxaa loo isticmaali karaa baradho la shiilay iyo baradhada french.
Ma taqaanaa? "Zhukovsky Early "ma madoobaado goortii goynta, kama cabsanaayo waxyeellada oo u adkaysata abaarta.
Nevsky waa baraf dhexdhexaad ah oo hore loo isticmaalo miiska. Noocyadaasi waxay ku xiran yihiin ecology iyada oo aan wax khasaare ah oo badanaaba lumin tilmaamayaasha dhalidda. Sababtan awgeed, waxaa si weyn loogu koray Ruushka. Horumarinta baradho, waxaa lagu siinayaa goosashada wanaagsan. Digriiga cad ee waawayn waxaa lagu qallajiyaa indhaha casaan. Hilibka baradho waa caddaan. Qalabka cufan wuxuu u ogolaanayaa inuu isticmaalo wax soo saarka Fries french.
"Latona" waxa loola jeedaa baradhada goosashada hore iyo waxay u adkaysatay dhammaan xaaladaha cimilada. Baradhada huruudda ah waxay ku wareegsan tahay wareegga-qaabka qaababka jirka jilicsan. Baradku wuxuu dhadhamiyaa qorrax badan mana uusan karkarin marka uu wax cunayo. Kala duwanaanshuhu wuxuu u adkaysan karaa qolofta iyo firaaqada goor dambe, waxay dhalinaysaa qiyaastii 2-2.5 kg halkii geed.
"Lugovskoy" waa baraf xilli-dhexaad ah. Waxay leedahay dhadhan fiican oo waa kala duwanaansho badan baradhada Siberia. Beergoosku wuxuu gaarayaa 250 kg boqolkiiba. Ku adkaysashada jirro xun oo soo daahay. Digriiga qaawan ee ballaaran waxay leeyihiin jidh cad.
Dhexdhexaadinta Casriga ee Bilowga ah waxay leedahay dhalid deggan. In ka badan laba kiilo oo dalag ah oo rooti ah ayaa laga goyn karaa hal baadiyaha ah ee baradhadaas. Kala duwan waxaa lagu gartaa digriiga oval-qaabeeya oo leh jilicsanaan jilicsan. Diirka diirka baradho waa casaan yar oo indhaha ah. Kala duwan ayaa u adkaysata cudurada waxayna leedahay muuqaal qurux badan.
Meelaha qaarkood ee Siberia, kuwaas oo aan la sifeynin by dhaxan daran, baradho baradho Colorado laga yaabaa weeraraan baradho. Waxaad la dagaalami kartaa adoo adeegsanaya daroogada ("Prestige", "Taliye", "Kinmiks", "Taboo"), iyo adeegsiga hababka caanka ah.
Dhedigga dhexe ee "Sante" waxaa lagu kala soocay iyada oo ka soo horjeeda diidmadii ay u gashay dabaysha iyo cudurada kale. Under shuruudaha wanaagsan, baradho this kori karaa iyada oo aan kiimikooyin kasta. Digriiga waxay leeyihiin maqaarka dahabka ah, oo hoos yimaada jirka iftiinka jaalaha ah. Celcelis ahaan, miisaankoodu waa 80 g. Baradho waa la keydiyaa. Kala duwan ma aha oo kaliya dhadhan cajiib ah, laakiin sidoo kale ku haboon yahay soo saarista ee chips.
Kabaha Cas ee
Dutch "Scarlet Red" ayaa loo yaqaan mid ka mid ah Saadaasha ugu wanaagsan. Heerka sare ee difaaca ayaa noo ogolaanaya inaan sheegno in baradhadani ay aad u dhif u tahay jirro. Baradhada waxaa matala matooro waaweyn oo aad u sarreeya. Miisaanka mid ka mid ah baradhada noocan oo kale ah ayaa gaari kara 120 g. Jidh huruud ah ayaa lagu qariyaa maqaarka cas. Indhaha ku yaal diirka oo aan la arki karin. Xaalad wacan, goosashada ayaa la goyn karaa horaantii maalinta 45aad. Qaangaarka hore waa calaamad muhiim u ah noocyada baradhada Siberian.
Ma taqaanaa? Magaca barandhiga wuxuu udhacay Scarlett O'Hara - waa geesinimo ka mid ah suugaanta dhaqanka "Gone with Wind" Margaret Mitchell.
Baradhada miiska timo waxay ka timid Finland. Kala duwanaanta noocaas ah waxay rabtaa muddo dheer kaydinta. Cunto khudaarta cagaaran ee qaabka la kariyey waxay ku kala duwan yihiin amarka 60-120 g. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in la qodayo goor hore. Digriiga ovalaha ah ee baradhada waxay leeyihiin maqaar khafiif ah oo jaale ah oo khafiif ah. Indhuhu waa indho la'aan, oo aan la arki karin. Hilibka baradho waa huruud. Noocyada baradhada "Timo" ka dib karinta ka dib mugdiga ma madoobaato oo waa mid dahabi ah, cunto macaan iyo aad u dhadhan fiican.
"Nasiib wacan" - natiijo guuleysi ah oo ka timid hawsha beeraha ee Ruushka. Tani hore, aan qabin in doorashada ee ciidda ciidda ku daro liiska ee noocyo waaweyn-fruited ee baradho. Markaad baratid baradhadaas, waxaad heli doontaa digriiga waaweyn oo wareegsan.
Baradhada lafuhu waxay leedahay maqaar midab leh oo midab leh oo kareem ah. Waxaa lagu daboolay tiro yar oo ah sprouts yaryar, kuwaas oo ah qaababka noocyada kala duwan. Hilibka ee digriiga sida cad waa. Dhadhanka baradho ayaa sidoo kale aad u sarreeya.
Khudaarta sii kordhaya, fiiri wareegga dalagga. Kaabashka, basasha, qajaarka, bocorka, miraha, iyo cagaarka digada cagaaran ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee baradhada.
Dhiig sarreeya "Ural Early" wuxuu leeyahay dhadhan fiican. Digriiga waa oval, midab madow, oo leh maqaarka oo casaan iyo indho-tarjumo. Cunto badan oo baradho ah 100-140 g. Kordhinta noocyada kala duwan, waxaad helaysaa goosashada hore. Baradhadu ma qabaan cudurka kansarka, ma aha kuwo inta badan u nugul duufaanta iyo cudurada viral. Noocan ayaa kuu ogolaanaya inaad hesho goosashada goor hore, laakiin markaad beerto geedo lagu beeray. Inkastoo qashinka "Ural Early" waa caddaan, ma madoobaado marka la jarjaray.
Waa muhiim! Markaad dooranaysid baradhada dhirta, si taxaddar leh u fiiri wakhtiga Bisaylkiisa iyo xaddiga dalagga, iska caabinta cudurada, xogta dibadda iyo dhadhanka.
Dhammaan noocyada kor ku xusan waxay yihiin noocyada baradhada ugu fiican ee Siberia - waxay u dulqaadanayaan qabow iyo si deg deg ah u bislaadaan. Beeraleyda qibrada leh waxay kugula talinayaan in la beero dhawr nooc oo marmar ah.